June 11, 2019 marqaan Maqal Iyo Muuqaal, Puntland, Somalia, Somaliland, Wararka Puntland iyo Somaliland 7
FURSADDA DAHABIGA AH EE DAYACAN
Haddii ay Puntland taladeeda gacanta ku hayaan hoggaan tayo lihi isbaddal taariikhi ah baa maanta labada woqooyi ba ka hirgali lahaa runtii, sababta oo ah fursaddii oogu qaalisanayd baa iminka taagan oo in isbaddalkaas lagu hanto aad ugu beegan.
Qaddiyaddii SNM ee kala faquuqidda ummadda Soomaaliyeed maanta mar ay ka liidato wali ma soo marin oo fursadda rugteedu waa gadoodka beelaha Garxajis iyo in ka mid ah Habar Jeclada oo iyana dhabarka u duway. Habar Awal iyo Ayuub uun baa ku soo hadhay maadaama ay Arabku Garxajiska u jaanjeedhaan sida uu hidda Isaaqu yahay.
Haddii ay hoggaanka Puntland yihiin fariiddo fiiradheeri leh ee shaxda siyaasadeed ku farshaxansan iyada oo aanay xabbadi dhicin bay siyaabo habeysan oo ay beesha caalamka taageero buuxda kaga haystaan kacdoon shacabweyne Sool, Sanaag, Cayn iyo Togdheer ba uga kicin lahaayeen. Marka kacdoonkani dhugta iyo dheeha caalamka soo lagu soo jiito ayaa loo ololeyn lahaa afti gobolladan iyo Awdal ba toos looga qaado masaladan “Somaliland” iyo gooni u goosadka ay SNM-tu ku soo daashatay.
Waxaa xigi lahaa shacabka gobolladan oo ay Puntland beesha caalamku ugu dhisto maamul cusub oo geyigaas matalaya. Sidaas ayay Jeegaantu ku hoyan lahayd iyada oo aanay bar dhiig ahi daadanin. Nasiib darro se Majeerteenka hoggaanka haya ayaa waxaa isku sumeeyay waabeydii ay Cadde Muuse iyo Cabdi Weli Gaas Maxamuud Saleebaanka waraabiyeen oo maanka iyo caqliga aya ka wada curyaameen oo fursadda taagan ka indho iyo dhega tiray.
Jeegaantii”Beesha”?..Habar/Awal Oo Noqotay*(biyo sare tagay waa la sugayaa?…( Wadar iyo waaxid yaa waalan)?….
1)Clear”/Memories”: Waxaan waaya arag u nahay in nidaamka xisbiyada badan soomaalidu soo tijaabisay oo aynu gaarnay heer jifi walba xisbi samaysato, summadna u yeelato. Kala fogaansho iyo is nacayb baana laga dhaxlay.
Jecliyaa Rag Waaweeyn Oo Barooranayaaa!!
Kkkk ISAAQU waa IMTIXAAN…
Dhaydii buu ka lisay FAQASHTII..baqaaaq da ka baxaysa Meadiyaha xataa anigaa ka seexan kari waayay RUNTII…
War yaa HAWEEN dhirbaaxi jirray?!
sanaag waa laga sifeeyey jeegaantii, waxaa hada fox ku saaran yahay sool saaxiib hadaad fashil hore u dhacay aad maqashay , ma ogid ,miyaa fashilka in guushu ka danbayso,koley waayaha is bedbedlka aduunka lama socotid masaakiin aan aqoon lahayn baad u muuqataa
Caare… waa habar majeerteen ah naaso waa weyn oo qardho joogta ma iman karo . Caarigaabo, sanaag Somaliland